आज, तियानमेन स्क्वायर नरसंहारको ३३औं वर्ष पूरा, के भएको थियो ? « pennepal.com
आज, तियानमेन स्क्वायर नरसंहारको ३३औं वर्ष पूरा, के भएको थियो ?
Published On :4June, 2022 8:14 am By :
एजेन्सी । चीनले ३३ वर्षअघि भएको आन्दोलनलाई दमन गर्न हजारौं निहत्था विद्यार्थीमाथि ट्यांक चढाएको थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आदेशमा जनयुद्धको यो कारबाहीमा १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी मारिएका थिए ।
यी विद्यार्थीहरू सन् १९८९ को जुनमा बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको समर्थनमा भेला भएको बताइएको छ । यो घटनाको क्षण आजभन्दा ३ वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको बेलायती गुप्तचर कूटनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
तियानमेन स्क्वायर हत्याकाण्डका बेला चीनको राजधानी बेइजिङमा तैनाथ तत्कालीन बेलायती राजदूत एलन डोनाल्डले लण्डनलाई पत्र पठाएर घटनाको पूर्ण विवरण दिएका थिए । पत्रमा उनले यो घटनामा कम्तीमा १० हजार मानिसको मृत्यु भएको लेखेका थिए । यो पत्र बेलायतको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिएको छ ।
चीनमा भएको यो घटनाको रिपोर्टिङलाई पनि त्यसबेला चीनबाट व्यापक रूपमा सेन्सर गरिएको थियो । यस घटनाको रिपोर्टिङमा चीनमा अझै पनि कडा प्रतिबन्धहरू छन् ।
जुन १९८९ मा, लाखौं प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ता बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरमा भेला भए । यसमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र मजदुरहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्व महासचिव तथा सुधारवादी हु याओबाङको मृत्युपछि यी विरोधहरू सुरु भएका हुन् ।
राजनीतिक र आर्थिक नीतिको विरोधका कारण तत्कालीन चिनियाँ सरकारले हु याओबाङलाई पदबाट हटाएको थियो । जसपछि उनको हत्या भएको थियो ।
छ हप्ता लामो प्रदर्शनलाई शान्त पार्न, जुन ३–४ मा, चिनियाँ सेनाले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका निहत्था नागरिकहरूमाथि बन्दुक र ट्यांकहरू चलाएको थियो । यस कारबाहीमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएका थिए ।
यस क्रममा चिनियाँ सेनाको ट्यांक रोक्न खोजेका एक युवकको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि यो ठाउँ विश्वभर चर्चित भएको थियो ।
पतिलाई नै भाडामा लगाउने पत्नी, भन्छिन् महंगीले गाह्रो पार्यो
एजेन्सी । पैसा कमाउने उद्देश्यले एक महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई नै ‘भाडा’ मा राखेकी छिन् ।
फिलिपिन्समा नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ हुँदै, के हो उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि ?
एजेन्सी । फिलिपिन्सका निवर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेको उत्तराधिकारीका रूपमा बिहीवार फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले शपथ लिनेछन्
परजीवीको त्रासले लाखौँ मौरी लकडाउनमा
एजेन्सी । अस्ट्रेलियामा लाखौँ मौरीलाई ‘लकडाउन’मा राखिएको छ । घातक परजीवी भेटिएपछि सरकारले हजारौँ मौरीलाई
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा आन्तरिक विवाद नयाँ होइन। पार्टीको बैठक बोलाउनेदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण
काठमाडौं । सरकार केही दिनमै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी
विवादास्पद फैसला गर्ने ६ न्यायाधीश छानबिनको घेरामा
काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीशको फैसला विवादित बनेपछि हालसम्म ६ न्यायाधीश न्यायपरिषदको छानबिनको घेरामा परेका छन्